Maxaa ka jira in dib loo dhigayo doorashada Soomaaliya? – Puntland News
Home 2016 April 25 Opinion, Somali News Maxaa ka jira in dib loo dhigayo doorashada Soomaaliya?
Maxaa ka jira in dib loo dhigayo doorashada Soomaaliya?
April 25, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
Waxaa jira xoga isa soo taraya oo shaki gelinaya qabsoomidda doorashada Soomaaliya xilligii loogu talagalay, qaar ka mid ah xogahan waxay xoojinayaan in doorashada Soomaaliya la qaban doono sanadka dambe ee 2017, waxayna cuskanayaan qodobo macquul ah, sida waqtiga oo ciriiri ah, dhaqaale la’aan iyo weliba qodobo kale.
Doodan waxaa sii xoojiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Cismaan Jawaari oo arimahan laga wareystay. Wareysigan ayuu Jawaari ku sheegay in dastuurka dalka farayo xilliga la qabanayo doorashada, balse ay jiraan duruufo ka hor joogsan kara fulinta amarkaas dastuuriga ah.
Mar wax laga weydiiyay waqtiga la qabanayo doorashada, Jawaari waxuu yiri:
“waxay ku xiran tahay hadba sida xukuumadda ku soo diyaargarowdo. 20-ka bisha august ayuu ku eg yahay waqtiga baarlamaanka, sidoo kale 10-ka september ayuu ku eg yahay waqtiga madaxweynaha iyo xukuumadda, marka taas macneheedu ma aha mar hadii la gaaro 20 bisha baarlamaan ma jiro, madaxweyne ma jiro, qaanuun la’aan baa la ahaanayaa, way sii wadanayaan shaqadooda ilaa iyo inta laga soo saarayo natiijada doorashada iyo baarlaanki cusbaa ee dhisi lahaa dowladda, marka taas waqti dheereysi ma aha, waxaa la raadinayaa xal looga gudbo marxaladan 2016 ayuu hadalkiisa sii raaciyay mr Jawaari”.
Hadalka Jawaari waxuu u muuqdaa mid boqolkiba boqol xoojinaya xogta sheegeysa dib u dhaca doorashadii loo balan sanaan bisha August 2016, sidoo kale waxaad moodaa in uu sii difaacayo doodaha iman kara mustaqbalka marka xaajadu kashifanto.
Waxaa kaloo xusid mudan in golayaasha dowladda aysan qabin wax degdeg ah. Dib u dhac walba oo la soo darsa arimaha doorashada waxay u arkaan nafdheereysi iyaga u dan ah, siiba kooxda uu kabiirka u yahay mr Jawaari. Noole walba wuu og yahay in mar uun nafta laga qaadi doono, laakiin hadana cidna ma jecla in ay mawdka ku soo degdego, waana sababta keeni karta in golayaasha dowladda ku raftaan kuraasta iyaga oo yaqiinsan in doorasho lama huraan tahay.
Intaa waxaa dheer qolyaha madaxtooyada, xukuumadda iyo saaxiibadood madaxweynayaasha maamullada oo ah kooxda iyaga abaabushay xeer jajabkan lagu gelayo doorashada iyaga oo kaashanaya beesha lixaad wax u diyaarsan lama arko. Si doorasho u dhacdo sanadkan loona fuliyo qodobadii ku xusnaa war-murtiyeedki ama xeer jajabki Muqdisho waxaa kooxdan laga rabaa xariiqa tubta iyo toobiyaha la marayo, ilaa iyo hadana ma jirto hal tallaabo oo dhankaas loo qaaday. Waxaa ka sii daran sida la sheegayo dhaqaalihi howshan lagu fulin lahaa gacan laguma hayo, beesha caalamkaa laga war-sugayaa!!!!.